PCB adag - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax - Focus on Daabacaadda Gudiga Wareegtada Daabacan iyo Adeegyada Turnkey PCB Assembly, Tayo Sare, Qiimo Jaban, Bixin Degdeg ah iyo Dalbasho Fudud oo loogu talagalay macaamiisha adduunka oo idil.
Badeecada kaladuwan ee adag PCB ee Fumax ay bixin karto：
* PCB-yada ilaa 48 lakab
* Alu core, sidoo kale taarikada-dhex
* Sawirka Tooska ah ee Laser (LDI)
* Microvias laga bilaabo 75µm
* Fiidiyow-indhoole-iyo-la aasay
* Ku Xidhitaanka Ku Xidhka / Isku Dhigista
* Lakabka （2-40 lakab） ；
* Cabbirka PCB （Min. 10 * 15mm, Max.508 * 889mm） ；
* Dhumucdiisuna waxay dhammaatay （0.21-6.0mm） ；
* Min dhumucdiis naxaas base 1/3 OZ (12um) ； ；
* Max dhammadkiisii ​​naxaasta finished 6 OZ ； ；
* Min trace width / spacing （Lakabka gudaha: Qaybta 2 / 2mil, guud ahaan 3 / 3mil; Lakabka dibedda: Qaybta 2.5 / 2.5mil, guud ahaan 3 / 3mil） ；
* Dulqaadka cabirka cabbirka （± 0.1mm）;
* Daaweynta Dusha sare （HASL / ENIG / OSP / HOGGAAN BILAASH HASL / DAHABKA BILAASH / QIIMAYNTA Ag / IMMERSION Sn） ；
* Dulqaad la'aanta Xakamaynta Impedance （± 10%, 50Ω iyo ka hooseeya: ± 5Ω） ；
* Midabka Maaskaro Adag （cagaar, buluug, casaan, caddaan, madow）.
Adag Guddiyada Wareegtada Daabacan waxay bixisaa cufnaanta wareegga oo kordhay waxayna yareyn kartaa cabirka iyo miisaanka guud ee guddiga. Tani waa sababta qaar badan shirkadaha elektarooniga ah ee adduunka ku isticmaal looxyadan dhowr qalab elektiroonig ah iyo aalado. Cabbirka is haysta, difaaca jirka ee dhaqdhaqaaqa, iyo dayactirka fudud ayaa ka dhigaya PCB-yada adag in ay yihiin shey ku habboon dalabyo kala duwan. Waxay si gaar ah waxtar ugu leeyihiin warshadaha meelaha ay u baahan yihiin in la hagaajiyo, waxayna u baahan yihiin inay wax ka qabtaan culeyska codsiga, iyo heerkulka sare.
* Warshadaha elektarooniga iyo otomaatiga: PCB-yada adag waxaa loo isticmaali karaa in lagu taageero iftiinka iyo sidoo kale codsiyada culus. PCB-yada kaladuwan ayaa loo adeegsan karaa inay bixiso caqabad xakameyn ah iyo abuurista xiriirro aasan. PCB-yada culus ee culus ayaa loo isticmaali karaa in lagu taageero barnaamijyada ku lug leh danab sare iyo soo noqnoqoshada. . Tusaalooyinka codsiyada otomaatigga waxaa ka mid ah aalado, gaaska iyo kontoroolayaasha xakamaynta, soo qaado oo meel dhig qalabka, iyo kuwa xoogga saara.
* Caafimaad: Inkasta oo wareegyada jilicsan ay caan ku yihiin qaybtaan, PCB-yada adag ayaa sidoo kale boos ku leh codsiyada caafimaadka. Waxaa badanaa loo isticmaalaa qalabka cabbirka weyn, ee aan la qaadi karin. Tusaalooyinka kuwan waxaa ka mid ah qalabka tomography, mashiinnada Electromyography (EMG), iyo nidaamyada Magnetic Resonance Imaging (MRI).
* Aerospace: Warshadaha aerospace waxay ka kooban yihiin jawi adag, jawi heerkulkiisu sareeyo. PCB-yada adag ayaa halkaan ku imaan kara, maxaa yeelay waxaa loogu qaabeyn karaa maaddooyinka naxaasta iyo aluminium, iyo laminates heerkulka sare. Tusaalooyinka codsiyada aerospace waxaa ka mid ah Unugyada Auxiliary Power (APUs), qalabka duulimaadka diyaaradda, qalab beddelayaasha awoodda, dareemayaasha heerkulka, iyo nidaamyada qalabka dhismaha ee munaaradda.
* Baabuurta: PCB-yada adag waxaa laga heli karaa gawaari dhexdhexaad ah ama weyn. Sida codsiyada aerospace, PCB-yada waxaa lagu dhisi karaa maaddooyin sare oo naxaas ah iyo aluminium ah. Nalalka heerkulka sare ayaa lagu dari karaa si looga ilaaliyo kuleylka mishiinka iyo wasakheynta deegaanka. Kombuyuutarrada kumbiyuutarka ee loo yaqaan 'Automotive PCBs' sidoo kale waxaa lagu dhisi karaa naxaas la shiiday si cimri dherer loo wanaajiyo. PCB-yada adag waxaa loo isticmaali karaa barnaamijyada sida AC / DC rogayaasha korantada, Unugyada Kombuyuutarada Elektaroonigga ah (ECUs), dareemayaasha gudbinta, iyo sanaadiiqda iskuxirka qaybinta awoodda.